Ndị German na-ekwu na auf Wiedersehen makụọ na aka n'ime ụwa ọhụrụ post-COVID
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany » Ndị German na-ekwu na auf Wiedersehen makụọ na aka n'ime ụwa ọhụrụ post-COVID
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Education • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ndị German na-ekwu na auf Wiedersehen ịmakụ na aka na ndụ ọhụrụ post-COVID.
Ọrịa COVID-19 na Germany gbagoro n'ọkwa dị elu n'izu gara aga, n'agbanyeghị mmejuputa iwu siri ike nke na-abawanye nrụgide na ndị bi na ịgba ọgwụ mgbochi.
Ndị Hess ga-aga n'ihu na-ezere ịmakụ ndị ha hụrụ n'anya ọbụlagodi na njedebe nke ọrịa coronavirus gasịrị.
Ọtụtụ n'ime ndị a gbara ajụjụ ọnụ kwuru na ha agaghịkwa ekwe ndị ha na-amabughị aka.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ndị na-aza ajụjụ ọnụ agaghịzi akpọ ndị ọbịa n'ụlọ ha ọbụlagodi mgbe ọrịa ahụ gasịrị.
N’ime nnyocha e mere n’oge na-adịbeghị anya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n’ụzọ atọ nke ndị bi na steeti Hessen nke Germany, kwuru na ha ga-anọgide na-ezere ịmakụ ndị ha hụrụ n’anya. Ntuli aka ahụ gosiri na 39% nke ndị Hess ga-akwụsịkwa ịma aka na onye ọ bụla, na 64% agaghịkwa ekweta ndị bịara abịa, ọbụlagodi mgbe ọrịa COVID-19 kwụsịrị.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ndị German nyochara, ma ọ bụ 23%, kwuru na ha achọghị ịkpọ ndị ọbịa n'ụlọ ha n'ime ndụ ọrịa na-efe efe.
Nsonaazụ nyocha ahụ na-egosi mmetụta na-adịgide adịgide nke ọrịa COVID-19 ga-enwe na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, gụnyere ngosipụta ịhụnanya maka ndị ha hụrụ n'anya.
Nnyocha ahụ gosikwara na 46% nke 1,000 zara azịza agaghịzi aga egwu egwu, ihe nkiri ma ọ bụ ihe omume ime ụlọ ndị ọzọ buru ibu.
Na 40% nke ndị zaghachirinụ kwuru na ha bu n'obi ịnọgide na-eyi mkpuchi ịwa ahụ n'ọnọdụ ụfọdụ, dị ka mgbe ha na-agba ụgbọ ala ma ọ bụ ịzụ ahịa na nnukwu ụlọ ahịa, ọbụlagodi mgbe ọrịa COVID-19 gachara.
Ndị isi obodo na Gelnhausen, obodo Hessian dị ihe dị ka kilomita 40 n'ebe ọwụwa anyanwụ Frankfurt, akagbuola atụmatụ maka ahịa ekeresimesi nke afọ a n'ihi ọrịa Covid-19 na-arị elu. Onye isi obodo Daniel Christian Glockner kwuru, "Anyị na-akwa ụta nke ukwuu, mana anyị enweghị ike ịza maka ihe omume dị otú ahụ n'ihi nnukwu ọnọdụ."
Ọrịa COVID-19 n'ime Germany bilitere n'ọkwa dị elu n'ime izu gara aga, n'agbanyeghị mmejuputa iwu siri ike nke na-eme ka ndị bi na ya nweta ọgwụ mgbochi.
Agbanyeghị, mbọ mbelata emebeghị nke ọma kpamkpam. Dịka ọmụmaatụ, a kọrọ na ihe dị ka mmadụ 24 bu ọrịa COVID-19 na egwu egwu egwu na nso nso a na Freigericht, n'agbanyeghị na amachibidoro ndị na-ekiri ịgba ọgwụ mgbochi ịga.
Peter ekwu, sị:
November 13, 2021 na 00: 55
O meela ihe dị ka otu afọ ka egosiri na mmanye aka anaghị agbasa covid. Echere m na ndị Jamanị mara mma na-amụ ngwa ngwa.